China Wholesale Premium Bambu Utensil Drawer Organizer, Drawer Divider Silverware Organizer fitaovana ampiasaina amin'ny vilia cutlery- 5 Compartments miaraka amina orinasa mpanao hosodoko Grey | Bridge Style
Ambongadiny Premium Bambu Utensil Drawer Organizer, Drawer Divider Silverware Organizer fitaovana ampiasaina ao anaty «cutter»
Taham-panavotana avo lenta
Fampiasana multipurpose:Ity mpikarakara vatasarihana ity dia azo ampiasaina hitahiry entana madinidinika toy ny cutlery, firavaka, fitaovana fanoratana ary fitaovana. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny lakozia, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny, ary efitrano fandraisam-bahiny sns. Mety amin'ny fampiharana zavatra maro izy io amin'ny fotoana maro.
Bamboo Premium tonga lafatra: Ny fitoeram-bokatra vita amin'ny volotsangana dia toa milamina sy kanto. Tsy toy ny mpanamboatra hafa, ny mpikarakara fitaovan'ny volotsika dia nojinjaina amin'ny fahamatorana tanteraka mba hampitomboana ny tanjaka. Ho anao, midika izany fa mety haharitra ela kokoa noho ny vatasarihana vatanao ity mpikarakara Pipishell ity.
Fitehirizana azo ampiharina sy lavorary:Fantsom-bokatra ambongadiny vita amin'ny volom-borona 5 misy refy 13.8 x 9.9 x 2.36 santimetatra, ity mpikarakara volotsangana ity dia afaka mitahiry entana madinidinika amin'ny alàlan'ny komparty. Mora ny maka entana, afaka mamonjy fotoana mitady zavatra toy ny sotro sy knifes, penina ary mpitondra, rojo sy famantaranandro.
Fanorenana mafy orina sy fikojakojana mora: Ity mpikarakara vatasarihana lakozia ity dia matanjaka tsara hitazomana amin'ny toerany. Ary ity mpikarakara volotsangana ity dia azo fafana haingana amin'ny rano mafana ary kosehina amin'ny lamba mando fotsiny.
Teo aloha: Mpanaparitaka ambongadiny ambongadiny (slot 7-9)
Manaraka: Bridge Style Bamboo
Fitsapana sary hosodoko maimaim-poana amin'ny Pantone Color
Vidiny tsara indrindra ho an'ny Desktop Desktop Creative Box ...